किन गइरहन्छ झ्याप्प ,झ्याप्प बिजुली ? | Khash Khabar
गृह किन गइरहन्छ झ्याप्प ,झ्याप्प बिजुली ?
किन गइरहन्छ झ्याप्प ,झ्याप्प बिजुली ?
१० बैशाख २०७७, बुधबार ०६:२४
काठमाण्डौ । आजभोलि झ्याप्प झ्याप्प बिजुली जान थालेको छ । यसले सम्पुर्ण आमनागरिकको दैनिकीमा नकारात्मक असर परिरहेको छ । लकडाउनमा घरमै बसेर काम गर्नेहरु र अत्यावश्यक सेवा दिनेहरु पनि पटक–पटक बिजुली जाँदा हैरान भएका छन्। काम प्रभावित भएको छ ।
केहिले त बिजुली कम भएको भएर लोडसेडिङको तालिका नै प्रकाशन गर्न माग गरेका छन । तर नेपाल विद्युत प्राधिकरणले भने बिजुली नपुगेर बत्ती नगएको तर निकै खराब मौसमका कारण बत्ती गएको जनाएको छ ।
प्राधिकरणका अनुसार प्रसारण लाइनको एउटा बाटोमा खराबी आउँदा त्यसले धेरै क्षेत्रमा असर गर्ने भएकाले समस्या आएको हो । साथै पुरानो संरचनाका कारण पनि बिजुली जाने भइरहेको र त्यस्ता पुराना संरचनाको काम पनि भइरहेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
प्राधिकरणले बिजुली नपुगेर काट्नुपर्ने अवस्था नरहेको पनि स्पष्ट पारेको छ । प्राधिकरणका प्रवक्ता प्रवल अधिकारीले भन्नुभएको छ, ‘विद्युतको परिमाण त हामीसँग यथेष्ट छ बरु प्रतिकूल मैसमले ग्राहकको लोड विच्छेद हुँदा विद्युत गृहले पानी नै खेर फाल्नु परिरहेको छ । आखिर पानी त बिजुली नै हो नि ।’
उहाँले लकडाउनको समयमा कतै पनि बिजुली कटौती नहोस भनेर कर्मचारीहरु फिल्डमै रहेको पनि जानकारी दिनुभयो ।
‘मौसमका कारण यी महिनाहरुमा विद्युत प्रणालीमा गडबड भइ सेवा प्रभावित भइरहेको कुरालाई हामीले स्वीकार गरेको पनि उनले जनाएका छन । कोरोना भाइरसको कारण आदेश गरिएको लकडाउनमा समेत हाम्रा प्राविधिक टोलीहरु फिल्डमा खटिरहनुभएको छ । विद्युत सेवा अवरुद्ध हुँदा सकेसम्म चाँडो मर्मत सम्भार गरी सेवा सुरु गर्न प्राधिकरण हरसम्भव किसिमले प्रयत्नशील रहेको जानकारी हजुरहरुसमक्ष र्पुयाउन पनि यो स्ट्याटस लेख्नुपरेको ब्यहोरा निवेदन गर्दछु’, प्रवक्ता अधिकारीले फेसबुक पेजमा लेख्नुभएको छ ।